Ngomnyaka wokuqala wobomi bakhe umntwana uqonda ukuphuhliswa okukhulu ekuphuhlisweni kwakhe, kunye nokutya. Ukutya okunomdla kunyaka wokuqala wobomi kuyahluka. Yonke into iqala ngobisi lomama, kwaye ngokuthe ngcembe iya kwiiqhamo, imifuno, okusanhlamvu, iimveliso zenyama, ngoko umntwana ufunda ukuhlafuna kunye nokugwinya, kwaye emva koko ufunda ukujamelana nokutya okuluhlaza kunye nezinye ukutya.
Musa ukukhawuleza ukondla umntwana wakho ngokutya okuqhelekileyo okudliwa ngabantu abadala. Ekudleni komntwana kufanele kube yilezo kuphela izitya ezilungiselelwe ukuqwalasela inkqubo yokugaya umntwana, i-apparatus yayo yokuhlafuna, umzekelo, i-porridge, iifatata ezihlambulukileyo, i-cutlets ye-steam, i-casseroles. Kodwa ungayeki ukutya kwabantwana kwiimbiza, kuba ziqulunqwe ngokukodwa kubantwana abaselula kwiimeko apho abazali abanalo ixesha elaneleyo lokulungiselela umntwana ukutya. Kwiimeko ezinjalo, sebenzisa oku kutya okulungiselelwe. Kukho ukutya okuninzi okwenziwe ngabantwana, okwenziwe ngokukhethekileyo kubantwana abangaphezu konyaka omnye. Banikezwe ukulungelelaniswa okufanelekileyo kwimeko yobudala. Ngethuba lonyaka umntwana usondlo luyahlukahlukana, uluhlu lwezixhobo ezingasetyenziswa ngumntwana luya kwandiswa.
Xa uneminyaka yobudala ubudala, ubungakanani besisu esisemntwaneni buncinci, kodwa kuthatha iimfuno ezinkulu kwizondlo. Umntwana kufuneka adle kaninzi, kodwa inani lokutya kufuneka libe lincinci. Abazali mabaqaphele ukuba ukondla umntwana owufuna urhulumente othile, omele uwenze. Yondla yonke imihla ngexesha elifanayo. Ukutya komntwana kufanele kuchaneke. Ukutya umntwana kufuneka kube ngamahlanu ngelilanga, kunye nekhefu malunga neeyure ezingama-4.
Unyaka owodwa umntwana ufumana isixa esiphezulu sebele le-milkmilk okanye ubisi lwefom. Ukutya komntwana kuhlukene kakhulu, ukususela ekuqaleni komnyaka wesibini wobomi, iimveliso zobisi kufuneka zinikezwe ngesantya esifanayo, kwaye akusiyo yonkcenkceshe, kuba ubisi luba ngumthombo ontle weprotheni, i-phosphorus, i-calcium, iivithamini zeqela. Akufanelekanga ngaphandle kokutya komntwana. Nsuku zonke umntwana kufuneka athathe i-600 ml yemveliso yobisi kunye neyobisi.
Yenza okukhethekileyo kwimveliso yokutya kwabantwana: i-kefir, i-cottage ushizi, i-masses, i-yogurt, i-casseroles. Kubantwana abaneminyaka engaphezu komnye, kukho imimandla ekhethekileyo yobisi ephuculwayo kunye nezinto kunye namavithamini, kufuneka zibe khona ekudleni. Ubisi lukaMama ngumthombo obalaseleyo wezinto ezinokunceda umzimba kwaye ukhusela umntwana kwiimpawu ezincinci, kuzo zonke iintlobo zezifo. I-Cottage cheese kufuneka isetyenziswe ngumntwana kunyaka wokuqala wobomi, kodwa kufuneka ithathwe kancane kancane, uqhelane nomntwana wakho ngeendlela ezihlukeneyo, i-casseroles. Ngamanye amaxesha kunokwenzeka ukondla umntwana ngeeshizi, kumnike ieshizi ngosuku, kodwa qiniseka ukuba bancinci. Okanye unike ushizi kwifom evuyiweyo.
Imifuno kunye neengqolowa kubantwana
I-Kashi iyimfuneko ebalulekileyo ekudleni komntwana oneminyaka elilodwa. Udinga ukuyidla yonke imihla. Unokupheka ukutya okuninzi okutya, njengoko zizonke zizaliswe ngamanhlamvu, amaminerali kunye nezondlo eziyimfuneko ekwenzeni izinto ezikhulayo (buckwheat, millet, oatmeal, corn, semolina, oats).
I-Porridges inomdla kakhulu kumzimba womntwana, ukuphucula ukugaya, ukucebisa umzimba kunye nezinto ezincedo kunye nezinye izinto ezincinci zamaminerali kunye nezinto.
Musa ukukhawuleza ukufundisa umntwana wakho kwi-pasta. Emva kwakho konke, inkunzi iya kukwazi ukuyiqonda esi sidlo kwaye uyayithanda, kodwa isondlo se-macaroni asikona phezulu. Ukususela esemncinci, umntwana uyazidla ngokutya ngesonka. Okokuqala, kuyimfuneko ukuba ufunde umntwana kwimveliso yengqolowa, kuba ihamba phambili emzimbeni, kwaye ke ngoko uqala ukunyusa umntwana ngokutya okumnyama.
Zama ukutshintsha rhoqo imenyu yomntwana wakho. Ukuchitha ukutya (imifuno, iziqhamo). Ehlobo okanye ekwindla - ingaba yimveliso emitsha, imifuno entsha, imifuno ecocekileyo, i-casseroles. Ukuba umntwana wakho akasakulungeli ukutya ukutya, gxuba yonke imveliso kwi-grater. Kodwa entwasahlobo okanye ebusika, unako ukunyusa umntwana wakho ngeetayibheji ezidibeneyo ezifanelekileyo kwiimbiza, ii-porridges, isobho esilungile kwimifuno yabantwana. Unako ukunika umntwana udidi oluhlukeneyo lweebhanki, iziphuzo ziselo, i-yoghurts. Izityalo zizama ukunika kuphela ezo zikhula kumgca wethu, umzekelo: amapheya, ii-apula, i-plums, ingaba amajikijolo.
Zama ukutya njengoko kunokwenzeka ukuba iziqhamo kunye nemifuno enokungaqhelekanga, ubaphathe ngokuqaphela. Bangakwazi ukufaka isandla kwimeko yokunyamezela kwintsana okanye ukucasula emzimbeni. Nika iisero zomntwana (iberry okanye izityalo), i-yogurts eyahlukahlukeneyo kunye ne-kisels, i-compotes.
Imithetho eyisiseko yokutya okufakwayo
Iintlobo kunye nemifuno ihlambulula umntwana wakho
Ikhekhe laseHungary Dobosh
Ukwanda kwe-uric acid egazini
I-cookies entsha ye-Cookies entsha nekhadiyamom
Amachiza ama-hemorrhoids ekukhulelwe